श्रीकृष्णसंग नाम जोडिएको नमुना बस्तिको बारेमा, बल्ल खुलेरै बोलिन स्वेता (हेर्नुस भिडियो) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/श्रीकृष्णसंग नाम जोडिएको नमुना बस्तिको बारेमा, बल्ल खुलेरै बोलिन स्वेता (हेर्नुस भिडियो)
श्रीकृष्णसंग नाम जोडिएको नमुना बस्तिको बारेमा, बल्ल खुलेरै बोलिन स्वेता (हेर्नुस भिडियो)
काठमाडौं। २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको वि’नाशकारी भू’कम्पले नि’म्त्याएको मानव क्ष’ति र भौतिक संरचनाहरुको बिनाशले कयौ नेपालीहरुलाई घरबार बिहिन बनाएको थियो भने कतिलाई आफन्तबाट बिछोड बनाएको थियो । नेपाल सरकारले प्राधिकरण नै गठन गरि बैदेशिक लगानी सम्मेलन र विभिन्न एनजीओ आईएनजिओ मार्फत निजि आवास, पुरातात्विक संरचना, बिद्यालय भवन, सामुदायिक भवन, खानेपानी र सडक पुनिर्माणमा होमिएका थिए ।
तिनै निजि अवास पुनर्निर्माणमा हो’मिएकी चलचित्र कलाकार तथा चर्चित नायिका श्वेता खड्काले आफ्ना स्वर्गीय पति नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको सम्झनामा सिन्धुपाल्चोकको माझि बस्ति बनाउने अठोटका साथ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र निजी आवास पुनर्निर्माण आयोजना, केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाईसंग त्रिपक्षीय सम्झौता गर्दै पुनर्निर्माणमा होमिएकी थिईन ।
यसै क्रममा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधिन रहेको माझी बस्तीका बारेमा अनेक टिकाटिप्पणी र आ’रोप लागेपछि अभिनेत्री श्वेता खड्का पहिलो पटक सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिन अन्तरवार्तामा पुगेकी छन् । उनले पहिलो पटक सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएकी छन्।
माझी बस्ती ऋणमा डु’वेको र सहयोग गर्छु भनेर आश्वासन दिएकाहरुले पनि पैसा नदिएको भन्दै उनले फेसवुकमा स्टाटस लेखेपछि त्यसवारे निकै टिकाटिप्पणी भएको थियो।
स्वर्गीय नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको स्मृतिमा स्थापित श्वेता श्री फाउण्डेशन मार्फत सिन्धुपाल्चोकमा माझी बस्ती निर्माणको काम थालेकी थिइन् । उनका पूर्व तथा दि’वंगत पति श्रीकृष्ण श्रेष्ठको जन्मस्थान भएका कारण त्यो ठाउँ आफ्नो लागि निकै प्रिय भएकाले सामुहिक बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा सहित काम थालेकि थिइन्।
उनले केहि समय अगाडी लेखेकी थिइन्, २०७३, माघ १४ गते पहिलो पटक माझी बस्तिमा पाइला टेक्दा त्यहाँका दाजुभाइ तथा दिदी बहिनिहरुको आँखामा म प्रतीको आशा भरोशा र विश्वासलाई पढेको थिएँ । भुकम्पले ढालेका घरहरुलाई उठाउन मद्दत गरिदिने एउटा दरिलो हात र भुकम्पले थलिएर शिथिलभएका आत्माहरुलाई आँट, भरोशा र हिम्मत दिने एउटा अटुट साथको खोजी गरिरहेका स्थानियहरुसंग अंकमाल गरिरँदा म भित्र एउटा भिन्नै इक्ष्याशक्तीको उत्पत्ती भएको थियो ।
त्यही इक्ष्याशक्ति अनुरुप मैले स्थानीयहरुको भिडमा माझी बस्तिका ढलेकाघरहरुलाई उठाउने र उहाँहरुको काँधमाकाँध मिलाएर हिंड्ने प्रतिवद्दता जाहेर गरेको थिएँ । साँच्चै, त्यो प्रतिवद्दता जाहेर गरिरहँदा म एक्लो थिएँ र रित्तो थिएँ । पहिलो पटकको त्यो भ्रमण सकेर काठमाडौतिर फर्किरहँदा, मैले बाटोभरी मनमनै एउटा सुन्दर, सफा र शान्त बस्तीको चित्र कोरिरहेको थिएँ ।
एकिकृत माझी बस्ति म एक्लैको पेवा पक्कै होइन, यो तपाईं हामी सबैको साझा सम्पत्ती हो । यस्को बिकास र संरक्षणमा तपाईं हामी सबैले सकेको देन दिनु हामीसबैको कर्तब्य पनि हो । हामीले आआफ्नो तर्फबाट सानो प्रयास गर्ने हो भुकम्पले लुटेको माझी दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरुको खुशीलाई फर्काउनमा हामी सफल हुनेछौ । अर्को खुशीमा आफ्नो खुशी देख्नेहरुको हृदयमा मात्र मानवियता बाँचेको हुन्छ ।
आफ्नै खुशी र सुखको निमित्त मात्रा बाँच्नेहरुको जीवन कहिल्यै सर्थक हुँदैन । आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउनको लागि पनि समाज र देशको निमित्त सानै भएपनी देन दिनै पर्छ । आफ्नो लागि त जनावर र किरा फट्याङ्ग्रा पनि बाँच्छन् । तर, हामी मानवहौ ! प्रक्रितीको महान स्रुस्टीनै मानव हो, मानविय जीवनको प्रमुख धर्म भनेको सेवानै हो । अत: यो धर्मलाई आत्मसाथ गर्दै आआफ्नो क्षेत्रबाट हामी सबैले सक्दो देन दिने कार्यमा लाग्नै पर्छ ।
एकिक्रित नमुना माझी बस्ती निर्माणमा मेरो अगुवाईलाई मैले, मेरो धर्म र कर्मको रुपमा लिएकी छु । यो बस्तीलाई सबैको साझा बस्तिको रुपमा बिकास गर्न सबै तह र तप्कासंग समन्वय र सहकार्य गर्ने कोसिस गरेकीछु ।
वस्ती निर्माणको ९० प्रतिशत काम पनि सकिएको छ । तर अहिले श्वेताले दोस्रो विवाह गरेपछि र विवाहमा देखिएको तामझामलाई लिएर उनको स्टाटस माथि टिप्पणी गरिएको हो।
उनले श्वेता श्री फाउण्डेशनको नाम पनि परिवर्तन गरेर श्वेता मात्र राखेको र वस्ती निर्माणको कामवाट समेत हात झि’केको आ’रोप लगाइएको थियो । उनले विवाहमा गरेको तामझाम र माझी बस्तीमा लागेको ऋणलाई पनि जोडेर टिप्पणी गरिएको छ।
रुकुमको प्रसँगमा रेखा थापाले गरिन् युवतिको सपोर्ट भनिन केटीको बेइज्यत गरेर न्याय पाउने हो र ? (भिडियो हेर्नुहोस)
भिडियोमा हेर्नुहोस त्रिभुवन विमानस्थलमा यसरी बाजागाजा सहित स्वागत गरियो रविको